Iyo nyowani vhezheni yeSailfish 3.2 inouya nekuvandudzwa kwakati wandei kune mushandisi interface | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeSailfish 3.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwakati wandei kune mushandisi interface
Sailfish OS is mobile mobile system iyo yakawana kukosha nekufamba kwenguva, nekuti kwemwedzi mishoma ipapo anga ari mune zvinoonekwa zvevagadziri vakuru, Iyi ndiyo nyaya yeHuawei iyo panguva iyo yandaifunga nezvechirongwa ichi sechinotsiva Android, nekuda kwedambudziko rakakura rainotarisana naro nekuda kwekuvharirwa neUS.
Kune avo vachiri kusaziva Sailfish OS, iwe unofanirwa kuziva izvo iyi inoshandisa girafu yakavakirwa paWayland uye Qt5 raibhurari, mamiriro ezvinhu ehurongwa akavakirwa panheyo yeMer, iyo yakagadziriswa sechikamu chakakosha cheSailfish kubva munaKubvumbi, uye mapakeji eNemo.
Iyo mushandisi goko, iyo yekutanga nharembozha kunyorera, iyo QML zvikamu zvekuvaka iyo Silica graphical interface, yepakati yepakati yekumisikidza Android zvishandiso, yakangwara zvinyorwa zvekuisa injini uye dhata yekuenzanisira system ndeya proprietary.
Huawei iri kukurukura nezve mukana wekushandisa Aurora / Sailfish seimwe nzira
Nezve iyo nyowani vhezheni yeSailfish OS 3.2.
Jolla aburitsa vhezheni nyowani yayo Sailfish OS 3.2 inoshanda sisitimu, mairi rutsigiro rwakawedzerwa rweiyo Sony Xperia 10 smartphone inosimbiswa, chii chaive mudziyo wekutanga izvo Sailfish inogoneswa nekutadza kunyorera chikamu chedata remushandisi uye yakagadziriswa SELinux-based access chengetedzo maturusi.
SELinux parizvino inoshandiswa chete pakuratidzira manejimendi zvikamu uye masevhisi masevhisi.
Nokuda kwayo vagadziri Aurora mobile operating system (yakasarudzika vhezheni yeRostelecom's Sailfish inoshanda sisitimu) vakaita basa rekugadzirisa iyo interface kufona uye kugamuchira mafoni. Kune mafoni anouya, chidzitiro chakasiyana chakawedzerwa kuitira kuti kufona kuitwe kubva kunze kwenyika.
Iyo yekufona yekupedzisa ziviso maitiro yakagadzirwazve, kusunungura yakazara skrini dialog uye ikozvino yaitwa seyakavharika popup nemabhatani ayo anotendera iwe kuti ufonere zvakare kana kutumira meseji meseji.
Yakawedzerwa kugona kuratidza chiyeuchidzo nezve kudiwa kwekufona: kumisikidza chiyeuchidzo kunoitwa nekutsikirira zita rekunyorera mune iyo chinyorwa neakafona nhoroondo.
Izvo zvakare zvakasimbiswa izvo iyo interface yakashandurwa kune vashandisi vatsva: menyu anowedzera kuoneka uye mashandiro ekudzima katsamba kana kupinda mubhuku rekero hazvinyatso kujeka;
Reworked app ine alarm wachi. Sezvo yakawedzerwa kugona kunonoka kwearamu kwemaminetsi mashanu kusvika makumi matatu. Iyo timer ikozvino inogona kuiswa kune yechipiri yepedyo, uye kuverenga kweese akachengetedzwa maaera anogona kugadziriswazve kamwechete.
Yeimwe shanduko izvo zvinoratidzika mushambadziro:
Bhurawuza rakagadzirisa matambudziko kuvhura iyo saiti ye Twitter uye ndokusimbisa rutsigiro rweWebGL.
Kutsvaga mubhuku rekero kwakagadziridzwa pamberi pehuwandu hukuru hwevanowirirana hunowirirana nemamwe madivayiri.
Iyo Android Compatibility Layer yakagadziridzwa kune Android 8.1 chikuva. Kuvimbika kweiyo Android application kuvhurwa kwakawedzerwa uye iko kushanda kwekutsvaga kwevanosangana mubhuku rekero reApple kwakawedzerwa.
Vagadziri veiyo Aurora inoshanda sisitimu zvakare vakashandisa zvinotevera zvinowedzera.
Wakawedzera rutsigiro rwechikamu chedhata
Yakagadzirirwa kupatsanura zvikamu zvakasiyana zveiyo sisitimu yekushandisa uchishandisa SELinux.
Wakawedzera rutsigiro rwemhando dzakasiyana dzeBluetooth Low Energy (BLE) zvishandiso.
Wakawedzera kutumira zvisingawanikwe zviyeuchidzo kuburikidza neAction Sync.
Saizi yemadhairekitori inoratidzwa mune maneja wefaira (kana uchivhura dialog ine ruzivo rwakadzama).
Huwandu hwesarudzo dzeEAP dzakapihwa musina waya yekumisikidza yakawedzerwa.
Dambudziko nekusimbiswa uchishandisa password yakachengetedzwa zvitupa muOpenVPN yakagadziriswa.
Notifications yekukwana bhatiri mutero haina kunetsa uye isingawanzo.
Iyo inovaka yeiyi nyowani vhezheni yakagadzirirwa zvishandiso Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, Gemini, Sony Xperia 10, uye ikozvino yave kuwanikwa seOTA kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeSailfish 3.2 inosvika pamwe nekuvandudzwa kwakati wandei kune mushandisi interface
Ini handisati ndanyatso kujekesa kuti ndeapi machira Sailfish OS anogona kuiswa. Iyo inogara ichishambadzirwa asi zvimisikidzo hazvimbo kumbokurukurwa nezvazvo
NethServer yakasarudzika sarudzo yekugadzira maseva kumba kana hofisi